Wednesday May 27, 2020 - 11:16:29 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobollada Bay iyo Gedo ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in halkaas ay ka dhaceen weeraro lagu beegsaday ciidamada Xabashida Itoobiya.
Qaraxyo aad uxooggan oo ciidamada Itoobiya lagula beegsaday duleedka degmada Bardaale ee gobolka ayaa sababay khasaara soo gaaray ciidamada xabashida, ilo wareedyo ayaa sheegaya in qaraxa koowaad uu burburiyay gaari Uuraal ah oo ay wateen ciidanka Itoobiya.
Wariye ku sugan gobolka Baay ayaa SomaliMeMo khadka taleefanka ugu sheegay in illaa laba qarax lala helay kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada Itoobiya, mid kamida qaraxyada ayaa gabi ahaanba burburiyay gaari ay la socdeen saraakiil xabashi ah iyo maleeshiyaad soomaali ah kuwaas oo dal aqoon u ahaa.
Ciidamadan Itoobiyaanka ah oo shalay ka amba baxay Bardaale kunasii jeeda dhanka Qansaxdheere ayaa dhaafi la' masaafo dhan 10 KM waxayna lakulmayaan weeraro toos ah iyo qaraxyo uga imaanaya Al Shabaab.
Weerar kale oo ka dhacay saldhigga ciidamada Xabashida ee garoonka diyaaradaha degmada Baardheere ayaa sababay khasaaro, warar lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in weerarka oo dhacay xilli habeen ah uu dhaliyay in uu dab qabsado qaar kamid ah teendhooyinkii ay deegaan sanayeen melleteriga Itoobiya.
Diyaarad nuuca qumaatiga ukacda ah oo soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Baardheere ayaa dhanka Muqdisho udaabushay Meydad iyo dhaawacyo, dad ku sugan Baardheere ayaa sheegay in Al Shabaab ay weeraro ku mireen saldhigga Itoobiyaanka ee degmadaasi.